Sheekh Shariif oo dib ugu soo laabtay Muqdisho kana hadlay arrimo cusub oo xasaasi ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sheekh Shariif oo dib ugu soo laabtay Muqdisho kana hadlay arrimo cusub oo xasaasi ah
Madaxweynihii hore ee dowladii KMG ahayd Soomaaliya haatanna ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta markale soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kadib markii maalmihii ugu dambeeyay uu dalka dibadiisa ku maqnaa.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa safar gaaban ku tagay dalal dibadda ah oo ay ka mid yihiin dalalka Uganda, Kenya iyo Isku taga Imaaraadka Carabta, waxaana uu Muqdisho isaga tegay muddo seddex toddobaad kahor, kadib markii uu dib ugu soo laabtay 22-kii bishii September 2016.
Taageerayaal badan iyo mas’uuliyiin kooban ayaa maanta Sheekh Shariif kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, isagoona markii dambe loo galbiyay hoyga uu magaalada ka degen yahay.
Sheekh Shariif oo warbaahinta kula hadlay hoygiisa ku yaala magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu markale dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho, isagoo ka qeyb-gali doonna tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Sidoo kale, Sheekh Shariif ayaa ka hadlay dib u dhacyada faraha badan ee ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya, isagoona dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay ka gaabisay howshii dastuuriga aheyd ee loo xil saaray.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka mid ah musharixiinta ugu cad cad ee loo saadaalinaayo inuu ku guuleysan doonno doorashada sanadkaan, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in lagaba yaabo in doorashadaasi uu kusoo baxo shaqi aan laga fileynin inuu doorashada ku guuleysto, taas oo markii xilligeeda la gaaro la ogaan doonno.
Ugu dambeyntii, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu wadaa inuu magaalada Muqdisho kulamo aan caadi ahayn kula yeesho xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoona weydiisan doonno inay codkooda siiyaan.
Si kastaba ha ahaatee, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa hore u sheegay in hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya uu dalka ku hogaamin doonno qaab ka duwan sidii hore, taas oo uu ku tilmaamay inay ugu wacan tahay qibrad ka badan tii hore oo uu haatan leeyahay.